Lionel Messi oo ka murugeysan xaaladda Ronaldinho… (Miyuu isku dayi doonaa inuu Xabsiga ka soo saaro?) – Gool FM
(Barcelona) 15 Mar 2020. Sida wararku ay sheegayaan Lionel Messi ayaa ka murugeysan xaaladda uu ku sugan yahay Ronaldinho, laakiin iskuma dayi doono inuu ka soo saaro isaga Xabsiga uu ku xiran yahay.
Ronaldinho ayaa ku jira xabsi ku yaala dalka Paraguay kaddib markii lagu qabtay isagoo sita baasaboorro been abuur ah oo uu ku galay Waddankaas, waxaana sidoo kale la la qabtay walaalkiis.
Xaaladdaas ayaa ka dhigtay mid murugo ah dhammaan taageerayaasha uu ku leeyahay Adduunka oo uu ku jiro Lionel Messi.
Wargeyska Sport ayaa warinaya in ciyaaryahanku uu ka careysnaa eedeymo la xiriira inuu leeyahay qorshe uu kaga caawinayo Ronaldinho inuu xabsiga kaga baxo sida ugu dhakhsaha badan ee suurta galka ah, taasoo uu ku gacan seyray Leo.
“Messi aad ayuu uga xun yahay xaaladda shaqsiyeed ee Ronaldinho, laakiin waqti uma uusan sameynin wax dhaqaalo ama dhaqdhaqaaq garsoor ah si uu xabsiga uga saaro xiddigii hore ee Brazil,” Wargeyska Sport ayaa sidaas daabacay.
Waxa uu qormadiisa Wargeysku ku daray: “Qareennadiisa uma uusan darin inay ka shaqeeyaan kiiska, mana bixinayo dammaanadda afarta milyan ee Euro ah.”
Wargeyska Peruvian ee Libero ayaa shaaca ka qaaday in Messi uu afarta milyan ee euro ka bixin doono lacagtiisa uu isagu gaarka u leeyahay, sababtoo ah xiriirka gaarka ah ee ay wadaagaan Ronaldinho hadda iyo muddadii ay ka wada ciyaarayeen kooxda Barcelona, balse Messi hadda warkaas waa uu beeniyey.
Juventus oo qorsheyneysa inay qandaraaska u kordhiso Cristiano Ronaldo